फिरौतीको बलिदान परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा अनमोल उपहार | बाइबलले सिकाउँछ
फिरौतीको बलिदान के हो?
यसको प्रबन्ध कसरी गरियो?
यसबाट हामीलाई के-के फाइदा हुन्छ?
यस्तो प्रबन्धको लागि हामी कसरी आभारी हुन सक्छौं?
१, २. (क) कस्तो उपहार अनमोल हुन्छ? (ख) फिरौतीको बलिदान किन अनमोल उपहार हो?
तपाईंले अहिलेसम्म पाउनुभएको अनमोल उपहार के हो? उपहार अनमोल हुनको लागि त्यो महँगो हुनुपर्छ भन्ने छैन। वास्तवमा उपहारको महत्त्व पैसामा मोलतोल गरिंदैन। जुन उपहारले तपाईंलाई खुसी दिन्छ अनि तपाईंको कुनै खास आवश्यकता पूरा गर्छ, त्यो नै तपाईंको लागि अनमोल हुन्छ।
२ परमेश्वरले हामीलाई एउटा उपहार दिनुभएको छ, जसको तुलना हामीले पाउने अरू कुनै उपहारसित गर्न सकिंदैन। त्यो हो, उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टको फिरौतीको बलिदान, जुन यहोवाले दिनुभएका थुप्रै उपहारमध्ये सबैभन्दा अनमोल उपहार हो। (मत्ती २०:२८) उहाँले दिनुभएको यस अनमोल उपहारले हामीलाई अपार खुसी दिनुका साथै हाम्रो जीवनका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। फिरौतीको बलिदान वास्तवमै यहोवाको प्रेमको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो।
३. फिरौतीको बलिदान के हो र कुन कुरा बुझेपछि मात्र हामीले यो अनमोल उपहारको कदर गर्न सक्छौं?
३ फिरौतीको बलिदान मानिसजातिलाई पाप र मृत्युबाट उद्धार गर्ने परमेश्वरको माध्यम हो। (एफिसी १:७) बाइबलको यो शिक्षा बुझ्न अदनको बगैंचामा के भएको थियो भनेर सम्झनुपर्छ। आदमले पाप गर्दा तिनले के गुमाए भनेर बुझेपछि मात्र हामीले फिरौतीको बलिदान अनमोल उपहार हो भनेर कदर गर्न सक्नेछौं।
४. आदमले कस्तो जीवन पाएका थिए?
४ यहोवाले आदमको सृष्टि गर्दा तिनलाई अनमोल कुरा अर्थात्‌ त्रुटिरहित शरीर दिनुभएको थियो। तिनको दिमाग अनि शरीरमा कुनै त्रुटि वा खोट थिएन। तिनी कहिल्यै बिरामी पर्ने थिएनन्‌; बूढो हुने थिएनन्‌ र मर्ने थिएनन्‌। यहोवासित तिनको विशेष सम्बन्ध थियो। आदम “परमेश्वरका छोरा” थिए भनी बाइबल बताउँछ। (लूका ३:३८) मायालु बुबा र छोराबीच घनिष्ठ सम्बन्ध भएझैं आदमको पनि यहोवासित घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। यहोवा आफ्नो मानव छोरासित कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले तिनलाई रमाइलो काम दिनुभएको थियो अनि तिनले गर्नुपर्ने र गर्न नहुने कामबारे पनि राम्ररी सम्झाउनुभएको थियो।—उत्पत्ति १:२८-३०; २:१६, १७.
५. आदम “परमेश्वरकै स्वरूपमा” बनाइएका थिए भन्नुको अर्थ के हो?
५ आदम “परमेश्वरकै स्वरूपमा” बनाइएका थिए। (उत्पत्ति १:२७) यसको मतलब आदम हेर्दा परमेश्वरजस्तै देखिन्थे भनेको होइन। यहोवालाई देख्न सकिंदैन भनेर हामीले अध्याय १ मा सिकिसक्यौं। (यूहन्ना ४:२४) त्यसकारण यहोवाको शरीर मानिसको जस्तो रगत-मासुको शरीर होइन। यहोवाले आफूसित भएका गुणहरू राखेर आदमलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। जस्तै: प्रेम, बुद्धि, न्याय र शक्ति। त्यसैले तिनी “परमेश्वरकै स्वरूपमा” बनाइएका थिए भनिएको हो। आदम अर्को एउटा कारणले गर्दा पनि आफ्ना बुबाजस्तै थिए। त्यो हो—तिनीसित पनि छनौट गर्ने स्वतन्त्रता थियो। त्यसैले आदम कुनै मेसिनजस्तो थिएनन्‌। तिनले सही र गलत छुट्टयाएर आफै निर्णय गर्न सक्थे। तिनले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने निर्णय गरेका भए सुन्दर पृथ्वीमा सधैंभरि बाँच्न सक्थे।
६. परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेर आदमले के गुमाए र यसले गर्दा तिनका सन्तानहरूलाई के भयो?
६ तर आदमले परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेनन्‌। त्यसैले तिनी मर्नुपऱ्यो। परमेश्वरको आज्ञा नमानेर पाप गरेको हुनाले तिनले त्रुटिरहित जीवनका साथै सबै आशिष्‌ गुमाए। (उत्पत्ति ३:१७-१९) दुःखको कुरा, आदमले मात्र होइन, तिनका भावी सन्तानहरूले पनि यो अनमोल जीवन गुमाउनुपऱ्यो। बाइबल यसो भन्छ: “एकै जना मानिसद्वारा [अर्थात्‌ आदमद्वारा] पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापद्वारा मृत्यु र यसरी मृत्यु सबै मानिसमा व्याप्त भयो, किनकि तिनीहरू सबैले पाप गरेका छन्‌।” (रोमी ५:१२) हो, आदमले गर्दा हामी सबै जना जन्मजात पापी भयौं। त्यसैकारण तिनले आफू र आफ्ना सन्तानलाई पाप र मृत्युको दासत्वमा ‘बेचे’ भनी बाइबल बताउँछ। (रोमी ७:१४) आदम र हव्वाको लागि कुनै आशा थिएन किनभने तिनीहरूले जानाजानी परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे। हाम्रो लागि नि? के हाम्रो लागि कुनै आशा छैन?
७, ८. फिरौती भनेको के हो?
७ फिरौतीको बलिदानको प्रबन्ध मिलाएर यहोवाले मानिसजातिको उद्धार गर्नुभयो। फिरौती भनेको के हो? फिरौती भनेको बन्धकमा परेको कुरा छुटाउन तिरिने मोल हो। जस्तै, अपहरणमा परेको व्यक्तिलाई छुटाउन तिरिने पैसा। नोक्सानीको क्षतिपूर्तिस्वरूप तिरिने मोललाई पनि फिरौती भन्न सकिन्छ। जस्तै, कुनै मानिसले गर्दा दुर्घटना हुन गयो भने उसले आफूले पुऱ्याएको क्षति बराबरको पूरै मोल तिर्नुपर्छ।
८ आदमले गर्दा हामी सबैले बेहोर्नुपरेको ठूलो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति गर्न र हामीलाई पाप अनि मृत्युको दासत्वबाट छुटाउन कसरी सम्भव हुने थियो? आउनुहोस्, यहोवाले प्रबन्ध गर्नुभएको फिरौतीको बलिदान र यसबाट भएको फाइदाबारे विचार गरौं।
यहोवाले फिरौतीको बलिदानको प्रबन्ध कसरी गर्नुभयो?
९. कस्तो प्रकारको फिरौती आवश्यक थियो?
९ आदमले त्रुटिरहित शरीर गुमाएको हुँदा कुनै पनि त्रुटिपूर्ण मानिसले त्यो फिर्ता लिन सक्दैन। (भजन ४९:७, ८) त्यसको निम्ति त्रुटिरहित शरीरको मोल बराबरको फिरौती तिर्नुपर्थ्यो। किनकि परमेश्वरको वचन यसो भन्छ: “ज्यानको साटो ज्यान।” (व्यवस्था १९:२१) त्यसोभए आदमले गुमाएको त्रुटिरहित जीवन कसरी फिर्ता पाउन सकिन्थ्यो? त्यसको निम्ति अर्को त्रुटिरहित मानिसले “फिरौतीस्वरूप आफूलाई अर्पण” गर्नुपर्थ्यो।—१ तिमोथी २:६.
१०. यहोवाले फिरौतीको प्रबन्ध कसरी गर्नुभयो?
१० परमेश्वरले फिरौतीको बलिदानको प्रबन्ध कसरी गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो त्रुटिरहित छोराहरूमध्ये एक जनालाई स्वर्गबाट पृथ्वीमा पठाउनुभयो। हुन त यहोवाले स्वर्गदूतहरूमध्ये जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले सबैभन्दा प्यारो छोरा पठाउनुभयो। (१ यूहन्ना ४:९, १०) यी छोरा राजीखुसी आफ्नो घर छोडेर पृथ्वीमा आए। (फिलिप्पी २:७) हामीले अध्याय ४ मा सिकेझैं यहोवाले चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा आफ्नो छोराको जीवन मरियमको गर्भमा सार्नुभयो। परमेश्वरको पवित्र शक्तिले गर्दा येशू त्रुटिरहित मानिसको रूपमा जन्मिनुभयो। उहाँ हामीजस्तो पापको दासत्वमा हुनुहुन्नथ्यो।—लूका १:३५.
यहोवाले आफ्नो एक मात्र प्यारो छोरा हाम्रो लागि फिरौतीस्वरूप दिनुभयो
११. येशूले अरबौं मानिसका लागि कसरी फिरौतीको मोल तिर्नुभयो?
११ एक जना मानिसले कसरी अरबौं मानिसका लागि फिरौतीको मोल तिर्न सक्थ्यो? सबैभन्दा पहिला, अरबौं मानिस कसरी पापी भए, त्यो विचार गरौं। पाप गरेपछि आदमले त्रुटिरहित शरीर गुमाए। त्यसैले तिनले आफ्नो सन्तानलाई त्रुटिरहित जीवन दिन सकेनन्‌। तिनले पाप र मृत्यु मात्र दिए। येशू त्रुटिरहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिल्यै पाप गर्नुभएन। बाइबलमा उहाँलाई “अन्तिम आदम” पनि भनिएको छ किनभने हामीलाई जोगाउन येशूले आदमको ठाउँ लिनुभयो। (१ कोरिन्थी १५:४५) परमेश्वरप्रति पूर्णतया आज्ञाकारी हुँदै उहाँले आफ्नो त्रुटिरहित शरीर बलिदान दिनुभयो र आदमको पापको मोल तिर्नुभयो। यसरी येशूले आदमको सन्तानलाई आशा दिनुभयो।—रोमी ५:१९; १ कोरिन्थी १५:२१, २२.
१२. येशूले पीडा अनि कष्ट भोगेर के प्रमाणित गर्नुभयो?
१२ येशूले आफ्नो मृत्युअघि भोग्नुभएको पीडा अनि कष्टबारे बाइबलमा वर्णन गरिएको छ। मानिसहरूले उहाँमाथि पटक्कै दया-माया नदेखाई कोर्रा लगाए अनि हातखुट्टामा किला ठोकेर खम्बामा झुन्ड्याए। अन्तमा, असह्य पीडाले गर्दा त्यही यातनाको खम्बामा उहाँको मृत्यु भयो। (यूहन्ना १९:१, १६-१८, ३०; पृष्ठ २०४-२०६ हेर्नुहोस्।) येशूले किन त्यतिबिघ्न दुःख भोग्नुपऱ्यो? दुःखकष्ट आइपर्दा यहोवाका कुनै पनि मानव सेवक वफादार भइरहनेछैनन्‌ भनेर सैतानले चुनौती दिएको थियो। त्यसले कसरी यस्तो चुनौती दियो, यसबारे हामी पछि सिक्नेछौं। जस्तोसुकै दुःख अनि चरम यातना भोग्नुपरे तापनि यहोवाप्रति वफादार रहेर येशूले सैतानलाई मुखभरिको जवाफ दिनुभयो। यसरी छनौट गर्ने स्वतन्त्रता भएको त्रुटिरहित मानिस परमेश्वरप्रति वफादार रहन सक्छ भनेर येशूले प्रमाणित गर्नुभयो। आफ्नो प्यारो छोराको वफादारी देखेर यहोवा पक्कै पनि धेरै खुसी हुनुभयो!—हितोपदेश २७:११.
१३. येशूले कसरी फिरौतीको मोल तिर्नुभयो?
१३ फिरौतीको मोल कसरी तिरियो? यहूदी पात्रोअनुसार इस्वी संवत्‌ ३३, नीसान १४ मा शत्रुहरूले येशूको हत्या गर्दा यहोवाले हस्तक्षेप गर्नुभएन। यसरी येशूले आफ्नो त्रुटिरहित र पापरहित शरीर “सधैंभरिका लागि” अर्पण गर्नुभयो। (हिब्रू १०:१०) त्यसको तीन दिनपछि यहोवाले उहाँलाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो र स्वर्गमा छँदा जस्तो शरीर थियो, त्यस्तै शरीर दिनुभयो। चालीस दिनपछि उहाँ स्वर्ग फर्कनुभयो र परमेश्वरसामु फिरौतीको मोल चढाउनुभयो। (हिब्रू ९:२४) मानिसजातिलाई पाप र मृत्युको दासत्वबाट मुक्त गर्न येशूले तिर्नुभएको फिरौतीलाई यहोवाले स्वीकार्नुभयो।—रोमी ३:२३, २४.
फिरौतीको बलिदानले तपाईंलाई के-के फाइदा हुन्छ?
१४, १५. “पापको क्षमा” पाउन हामीले के गर्नुपर्छ?
१४ हामी अहिले त्रुटिपूर्ण अनि पापी भए तापनि फिरौतीको बलिदानले गर्दा अनमोल आशिष्‌ पाएका छौं। परमेश्वरले दिनुभएको यस अनमोल उपहारले गर्दा हामीलाई अहिले र भविष्यमा हुने फाइदाहरूमध्ये केही विचार गरौं।
१५ पापको क्षमा। जन्मेदेखि त्रुटिपूर्ण भएकोले सही काम गर्न हामीले निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। बोल्न नहुने कुरा बोलेर वा गर्न नहुने काम गरेर हामी पाप गर्छौं। येशूले तिर्नुभएको फिरौतीमार्फत हामी “आफ्ना पापहरूको क्षमा” पाउन सक्छौं। (कलस्सी १:१३, १४) तर त्यस्तो क्षमा पाउन हामीले मनैदेखि पश्‍चात्ताप गर्नै पर्छ। साथै उहाँको छोराले अर्पण गर्नुभएको फिरौतीको बलिदानमाथि पनि विश्वास गर्नै पर्छ। अनि त्यही विश्वासको आधारमा नम्र हुँदै यहोवासित क्षमा माग्नुपर्छ।—१ यूहन्ना १:८, ९.
१६. हामी कसरी सफा अन्तस्करण राखेर परमेश्वरको उपासना गर्न सक्छौं? अन्तस्करण सफा राख्दा कस्तो फाइदा हुन्छ?
१६ सफा अन्तस्करण। दोषी भावको बोझले गर्दा हामी निराश हुन्छौं र आफैलाई धिक्कार्छौं। तर यहोवाले फिरौतीको बलिदानको आधारमा हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसैले हामी त्रुटिपूर्ण भए तापनि कुनै दोषी भाव नराखी सफा अन्तस्करणले उहाँको उपासना गर्न सक्छौं। (हिब्रू ९:१३, १४) हामी निर्धक्क भई यहोवालाई प्रार्थना गर्न सक्छौं। (हिब्रू ४:१४-१६) आफ्नो अन्तस्करण सफा राख्दा हाम्रो मनमा शान्ति हुन्छ, हाम्रो आत्म-सम्मान बढ्छ र हामी अझ खुसी हुन सक्छौं।
१७. येशूले तिर्नुभएको फिरौतीले गर्दा हामीले कस्ता आशिष्‌हरू पाउनेछौं?
१७ पृथ्वीमा अनन्त जीवनको आशा। “पापले तिर्ने ज्याला मृत्यु हो” भनी रोमी ६:२३ बताउँछ। सोही पद अझ यसो भन्छ: “तर परमेश्वरले दिनुहुने वरदान हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट येशूमार्फत अनन्त जीवन हो।” चाँडै स्थापना हुने नयाँ संसारमा कस्ता आशिष्‌हरू पाउनेछौं भनेर हामीले अध्याय ३ मा सिकिसक्यौं। (प्रकाश २१:३, ४) सुस्वास्थ्य अनि अनन्त जीवनलगायत सबै आशिष्‌ येशूको बलिदानले गर्दा नै सम्भव भएको हो। तर ती आशिष्‌ पाउन फिरौतीको बलिदानको लागि हामी आभारी हुनुपर्छ।
हामी कसरी आभारी हुन सक्छौं?
१८. फिरौतीको बलिदानको लागि हामी यहोवाप्रति किन आभारी हुनुपर्छ?
१८ फिरौतीको बलिदानको लागि हामी किन यहोवाप्रति आभारी हुनुपर्छ? निकै समय खर्च गरेर, मेहनत गरेर वा पैसा खर्च गरेर दिइएको उपहार अनमोल हुन्छ। हामीलाई साँच्चै माया गरेर दिएको उपहारले हाम्रो मन छुन्छ। फिरौतीको बलिदान हाम्रो लागि सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार हो किनभने हामीलाई त्यो उपहार दिन परमेश्वरले ठूलो त्याग गर्नुभयो। यूहन्ना ३:१६ यसो भन्छ: “परमेश्वरले संसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक मात्र छोरा दिनुभयो।” फिरौतीको बलिदान यहोवा हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको ठूलो प्रमाण हो। यो येशूको प्रेमको प्रमाण पनि हो किनभने उहाँले हाम्रो लागि राजीखुसी आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभयो। (यूहन्ना १५:१३) त्यसकारण यहोवा र उहाँको छोराले हामी प्रत्येकलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ भनी ढुक्क हुन सक्छौं।—गलाती २:२०.
फिरौतीको बलिदानको लागि तपाईं आभारी हुनुहुन्छ भनी देखाउने एउटा तरिका यहोवाबारे अझ धेरै सिक्नु हो
१९, २०. फिरौतीको बलिदानको लागि हामी कसरी आभारी हुन सक्छौं?
१९ फिरौतीको बलिदानको लागि हामी कसरी आभारी हुन सक्छौं? एउटा तरिका हो, फिरौतीको बलिदानको प्रबन्ध गर्नुहुने यहोवाबारे अझ धेरै सिक्ने प्रयास गरेर। (यूहन्ना १७:३) यस किताबको मदत लिंदै बाइबलको अध्ययन गर्दा तपाईंले यहोवाबारे अझ धेरै सिक्नुहुनेछ। तपाईंले यहोवाबारे जति धेरै ज्ञान लिंदै जानुहुन्छ, त्यति नै उहाँप्रतिको प्रेम बढ्दै जानेछ। अनि त्यस्तो प्रेमले गर्दा उहाँलाई खुसी तुल्याउने इच्छा पनि बढ्नेछ।—१ यूहन्ना ५:३.
२० फिरौतीको बलिदानमा विश्वास गर्नुहोस्। बाइबल यसो भन्छ: “जसले छोरामाथि विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाउँछ।” (यूहन्ना ३:३६) येशूमा विश्वास गर्छौं भनी हामी कसरी देखाउन सक्छौं? हामीले मुखले भनेर मात्र पुग्दैन काम पनि गर्नुपर्छ। किनभने याकूब २:२६ यसो भन्छ: “कामविना विश्वास पनि मरेको हुन्छ।” हो, साँचो विश्वास “काम”-द्वारा देखाइन्छ। त्यसकारण हामीले कुनै कुरा बोल्दा वा कुनै काम गर्दा येशूको अनुकरण गर्न यथासक्दो प्रयास गर्नुपर्छ।—यूहन्ना १३:१५.
२१, २२. (क) हामी किन स्मरणार्थ उत्सवमा उपस्थित हुनुपर्छ? (ख) अध्याय ६ र ७ मा कुन कुरा छलफल गर्नेछौं?
२१ येशूको मृत्युको स्मरणार्थ उत्सवमा उपस्थित हुनुहोस्। इस्वी संवत्‌ ३३, नीसान १४ को साँझ येशूले एउटा विशेष उत्सव स्थापना गर्नुभयो, जसलाई बाइबलमा “प्रभुको साँझको भोज” भनिएको छ। (१ कोरिन्थी ११:२०; मत्ती २६:२६-२८) यस उत्सवलाई ख्रीष्टको मृत्युको स्मरणार्थ पनि भनिन्छ। उहाँले आफ्ना चेलाहरू र सबै साँचो ख्रीष्टियनलाई यो उत्सव मान्ने आदेश दिनुभयो। त्रुटिरहित मानिसको रूपमा आफ्नो जीवन बलिदान दिएर येशूले तिर्नुभएको फिरौतीको मोल तिनीहरूले सम्झून्‌ भनी उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले यसो भन्नुभयो: “मेरो सम्झनामा यो गर्नेगर।” (लूका २२:१९) स्मरणार्थ उत्सवले यहोवा र येशू दुवैले देखाउनुभएको गहिरो प्रेम सम्झने मौका पनि दिन्छ। त्यसैले येशूको मृत्युको स्मरणार्थ उत्सवमा उपस्थित भएर हामी आफ्नो कृतज्ञता देखाउन सक्छौं। *
२२ फिरौतीको बलिदान यहोवाले दिनुभएको अनमोल उपहार हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। (२ कोरिन्थी ९:१४, १५) मरिसकेका मानिसहरूलाई समेत यस अनमोल उपहारले फाइदा पुऱ्याउँछ। कसरी? त्यसको जवाफ अध्याय ६ र ७ मा पाउनेछौं।
^ अनु. 21 थप जानकारीको लागि पृष्ठ २०६-२०८ हेर्नुहोस्।
यहोवाले फिरौतीको बलिदानमार्फत मानिसजातिलाई पाप र मृत्युबाट छुटाउनुभयो।—एफिसी १:७.
यहोवाले आफ्नो एक मात्र प्यारो छोरालाई पृथ्वीमा पठाउनुभयो, जसले आफ्नो जीवन बलिदान दिएर फिरौतीको मोल तिर्नुभयो।—१ यूहन्ना ४:९, १०.
फिरौतीको बलिदानमार्फत हामीले पापको क्षमा, सफा अन्तस्करण र अनन्त जीवनको आशा पाएका छौं। —१ यूहन्ना १:८, ९.
यहोवाबारे अझ धेरै सिकेर, येशूको बलिदानमा विश्वास गरेर अनि स्मरणार्थ उत्सवमा उपस्थित भएर हामी आभारी हुन सक्छौं।—यूहन्ना ३:१६.
फिरौतीको बलिदान​—⁠परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा अनमोल उपहार (भाग १)
फिरौतीको बलिदान—परमेश्‍वरले दिनुभएको सबैभन्दा अनमोल उपहार (भाग २)
शेयर गर्ने शेयर गर्ने फिरौतीको बलिदान परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा अनमोल उपहार